အလုပ်က နားတော့မလို့လား.. | Myanmar Gazette News Media Forum Network
Home » Creative Writing » အလုပ်က နားတော့မလို့လား..
Posted by နွေဦး on Jun 26, 2017 in Creative Writing, Think Different | 22 comments
” အဘရေ့.. ကျွန်တော်တော့ ဒီကောင်ကြီး နှစ်ကောင် နသတ်ရုံ ထုတ်လိုက်တော့မယ်ဗျာ.. ”
ကိုတိုးကြီး ပြောလိုက်တဲ့ စကားကြောင့် အဘ မောင်တင် တွေဝေသွားတော့တယ် ။
ခုတလော အသက်ကထောက် လာတော့ အလုပ်တွေကို သူ့သားကိုတိုးကြီးကို လွှဲတန်သလောက်လွှဲ နေပြီ..။
ဒီစပါးတရာသီ ကစလို့ သူ့သားကို ဦးစီးပြီး လုပ်ခိုင်းတော့မလို့ ပြောနေကြရာကနေ ကိုတိုးကြီး ပြောလိုက်တာပါ ။
” ဟေ… ဝန်ပေါ့တော့ ဆွဲခိုင်းလို့ရသေး မဟုတ်လား.. ”
” အဘရာ.. ခိုင်းရမှာနဲ့ ကျွေးထားရမှာ မကိုက်တော့ဘူးဗျ.. အဘ ကောင်ကြီးတွေက ကျနေပြီ. ခုနေ ပွဲစားလက်ထည့်ရင်တောင် ဈေးရမှာ မဟုတ်တော့ဘူး..”
” တို့နဲ့ အတူရုန်းလာတာ ကြာပြီလေ.. ”
” ဗြာတစ်ရှဉ်းက ဒီမိုး ခိုင်းရပြီလေ.. နနီတစုံကလဲ ဒီနွေဆို ထမ်းပိုးကျင့်လို့ရပြီ.. ”
အဘမောင်တင် တွေဝေနေဆဲပါ..အတူရုန်းလာတဲ့ ခြံပေါက်တွေမို့ ရုတ်ချည်းတော့ သံယောဇဉ် ဖြစ်မိသကိုး..
တကယ်တော့ အဘမောင်တင် အဖေတွေလက်ထက်ကထည်းက နွားတွေကို နွားတွေ ခိုင်းသလို ခိုင်းခဲ့ကြတာပါ။
ကောက်ရိုးလက်တပွေ့ ဖွဲနုရေ ကျဲကျဲနဲ့ မွေးခဲ့ကြတာပါ. ။
သူတကာပြောသလို ရုန်းဖေါ်ရုန်းဖက် ရဲဘော်ရဲဘက် စိတ် မထားခဲ့မိပါဘူး.။
ခိုင်းမရတဲ့နွား..ကျလာပြီဆိုရင် ပွဲစားလက်ထည့် ရောင်းပစ်ခဲ့တာချည်းပါဘဲ..။
ခုတော့ အဘ လည်း အသက်ကလေးရလာတော့ ဘာမှန်းမသိတဲ့ သံယောဇဉ်လိုမျိုးတွေ ဝင်လာတယ်ထင်ပါရဲ့ ။နွားနှစ်ကောင် ရောင်းထုတ်ဖို့ကို ဝေဝါးနေတယ် ။
” ဒီနှစ်ကောင် ခန ဒီတိုင်းထားပြီး သင်္ကြန်ပြီး နှစ်ဆန်းတရက်နေ့မှာ ဘေးမဲ့လွှတ်ရင် မကောင်းဘူးလားကွ.. ”
” အဘ ကောင်တွေ ဘေးမဲ့လွှတ်ပြီး ဘုရားဝင်းထဲ စားကျက်မှာ နေရင်း နွားသူခိုးတွေ ဖမ်းပြီး ပေါ် လိုက်မှာဘဲဟာ.. ”
” ဒါဆိုလဲ အိမ်မှာဘဲ ဘေးမဲ့ထားလိုက်ကွာ.. ”
” အင်း.. အဘသဘောဘဲဗျာ.. ကျုပ်ဆိုရင် တော့ အသားမကုန်ခင် နသတ်ရုံ ပို့လိုက်မှာ.. ” ကိုတိုးကြီး မကျေမနပ်နဲ့ စကားဖြတ်သွားတော့တယ် ။
အဘမောင်တင် ပြောစရာစကားမရှိတော့မှ တဖြည်းဖြည်း တွေးရင်း ကိုတိုးကြီး နွားစာထည့်နေတဲ့ နွားတင်းကုပ်နားက ကွပ်ပျက်မှာ ထိုင်နေရာက တခုတခုကို သတိရသွားပြီး သူ့သားကို လှမ်းအော်လိုက်တယ်..။
” ဟေ့ကောင် ငတိုးကြီး.. ”
” ဗျာ..အဘ.. အလန့်တကြား ဘာဖြစ်လို့တုန်း.. ”
“ငါ လဲ အသက်ကြီးလို့ အလုပ်မလုပ်နိုင်တော့ဘူးကွ..”
“အေးလေ အဘ ကျုပ် လုပ်နိုင်နေပြီဘဲ.. အဘ အေးဆေး ထိုင်နေလို့ ရပြီလေ..”
“အေး တော်ကြာ ငါ့မကျွေးနိုင်လို့ဆို နသတ်ရုံ ပိုတော့ မခက်လား..”
“ဟားဟား.. အဘ ကရီစရာ ပြောနေပြန်ပြီ.. အဘကို နသတ်ရုံ ပို့စရာလား..”
အေး..ဒါပေမဲ့ အိမ်မှာ လူပိုကြီး ငုတ်တုတ် ဆို အနေခက်သကွ.. ”
“ဒါများ အဘရာ အဘ လှူထားတဲ့ ဇရပ်ရှိသားဘဲ ..အဲဒီရိပ်သာမှာ သွားနေပေါ့..”
“အေး..ဟုတ်ပါရဲ့ ငါ့ ဘေးမဲ့လွှတ်ဖို့ နေရာတော့ ရှိသေးသားပါလား..”
ခုတော့ အဘမောင်တင် လုပ်ဖေါ်ကိုင်ဖက် အတွက် စာနာတတ်လာပြီပေါ့..
သူ့သား ကိုတိုးကြီးကကော ဘယ်အချိန်မှာ ဒီလိုခံစားချက် ပေါ်လာမလဲ လို့ စောင့်ကြည့်ရမယ်..
နွေဦး ပင်စင်စားပါတော့မယ်.. ။
အသက်ကြီးလာရင် ဘာမှ လုပ်စရာမရှိလို့ (ဝါ) မလုပ်နိုင်လို့…
ဘုရားကျောင်းကန်ရိပ်မှာခိုရင်း သေနေ့ကိုစောင့်နေရတာတော့ မနိပ်ပေါင် …
အူးနွေဦးလည်း ပင်စင်နာမစွဲအောင် … ကာရာအိုကေ မာဆတ်သွားပြီး …
ဖြစ်-ပျက် ကမ္မဋ္ဌာန်း ရှုပါလေ … တကယ် တကယ်…
အဲသည့်မှာ ဖြစ်ပြီး ပျက်ကုန်ကြတာ မြင်ရမှာမို့… တရားရဖို့ ပိုလွယ်တယ်…
မဟေသီရဲ့ ခွင့်ပြုချက်ကလဲ အရေးကြီးသဗျ..
ဘာသာတရားနဲ့နီးစပ်တဲ့သူတွေက အဲဒါတွေက အကုသိုလ် အလုပ်လို့ မှတ်ကြတာ..
ဘာသာရေးကို ထဲထဲဝင်ဝင် သိသူတွေကတော့ ခန္ဓာရယ် စိတ်ရယ် ကျန်းမာဖို့ လိုတာကို တွေးနိုင်သဗျ..
ခက်တာက ကိုယ့်ကိုယ်ကို အာမမခံရဲတာဘဲ..
ဦးကျောက်ပြောသလို ဖြစ်ပျက် ဆိုတာ သင်းတို့နဲ့ ဖြစ်ပြီး ကိုယ်ကပျက်သွားတော့မှ ဟုတ်ပေ့ဖြစ်နေမယ်..
အဲသည့်တော့လည်း … “တရားရှာ ကိုယ်မှာတွေ့” ဆိုတာ …
တကယ်မှန်ကြောင်း သက်သေပြပြီးသား ဖြစ်တာပေါ့… အာ ဟိ
စက်မှုလယ်ယာတစ်ခေတ် ဆန်းသစ်လာဖို့လည်း မျှော်လင့်အုန်းမှ။
အသက်ကြီးလို့ ပင်စင်စားရမယ့်အချိန် (၆၀)ကျော်ရင်
တောင်ကြီးဘက်က ရွာလေးတစ်ရွာမှာ သီးပင်စားပင် ပန်းပင်လေးတွေ စိုက်မယ်။ စာကြည့်တိုက်လို စာအုပ်ဆိုင်လို တစ်ခုခု ထူထောင်ထားပြီး ခွေးလေးတွေ ကြက်ကလေးတွေ မွေးမယ်။ စာအုပ်ဖတ်လိုက် ခြံစိုက်လိုက် ခွေးလေးတွေနဲ့ဆော့လိုက်နဲ့ပေါ့။
အဲ့လို နေနိုင်ဖို့ ကျနော်ဖြင့် အခုကတည်းက စီစဉ် စုဆောင်းရအုန်းမယ်။
သနားရင်.. တန်ဖိုးတခုရှိသွားအောင်.. စားပေးရသတဲ့…။ ဒါမှမဟုတ်ရင်.. လောကအတွက် ဘာမှအကျိုးမရှိပဲ.. ဘ၀ဆုံးသွားမှာ..။
စားပေးတာကနေ ရှိလာတဲ့အားနဲ့.. မြောင်းတွေဖေါ်.. ယင်၊ခြင်တွေမပွားနိုင်အောင်လုပ်ပေါ့..။
ဒါဆို.. ခြင်၊ယင်က ဖြစ်တဲ့ ရောဂါတွေ (နည်းနည်းတော့) လျှော့သွားမှာပဲ..။
နောက်တာနော..။ တကယ်မဟုတ်ဖူးဆိုတာ ဟုတ်ပါကြောင်း..။
ပင်စင်ယူလို့ အားရင် စနေတနင်္ဂနွေမှာ အဘိဓမ္မာသင်တန်းတက်ဖို့ ဖိတ်ပါတယ်။
လေ့လာကြည့်ရင် သိပ်စိတ်ဝင်စားဖို့ ကောင်းပါတယ်။
ပင်စင်မယူခင်.. အခုလည်း ငြင်းလို့ရပါတယ်..။
အဘိဓမ္မာအရ.. မှတ်ဥာဏ်ဆိုတာ ဘယ်လိုသိမ်းထားသလဲ သိချင်လို့ အမတော်ရေ..။
ဘ၀တွေကူးသွားတဲ့အခါမယ်.. အဲဒီသိမ်းထားတဲ့ မှတ်ဥာဏ်ဘယ်လိုသယ်သွားသလဲ ဆိုတာလည်း သိချင်လို့..။
“အဘိဓမ္မာအရ.. မှတ်ဥာဏ်ဆိုတာ ဘယ်လိုသိမ်းထားသလဲ သိချင်လို့ အမတော်ရေ..။”
ဆိုတာ နည်းနည်းတော့ရှင်းရခက်ပေမဲ့ အလွယ်ပြောရရင် မီးသီး တလုံး မှာ မီးလင်းအောင် လျှပ်စစ်ဓါတ် ဝင်တယ် ။ပြီး မီးပိတ်သွားတယ်. လျှပ်စစ်ဓါတ် က မကျန်ဘူး.. ဒါပေမဲ့ မီးသီးပူပြီး ကျန်နေတယ်..။
အဲလိုမျိုးဘဲ လူတွေမှာ စိတ် နဲ့ စေတသိတ် ဆိုတာ ရှိတယ် စိတ်က လျှပ်စစ်ဓါတ်လို ဖြစ်ပြီး ပျက်တယ် ။စေတသိတ် က ပူပြီးကျန်တဲ့အပူလိုမျိုးလေ.. အဲဒါကို ဖြန့်ကျက်တွေးပါ.. မရှင်းက အဘိဓမ္မာ စာအုပ်ကြီး ကိုင်ရှင်းနိုင်တဲ့ အမတော်တို့နဲ့ ဆွေးနွေးပေတော့..
သူကြီးဆီက ပွိုင့်ရအောင် ပို့စ်တင်ထားတယ်။
ဖိတ်ခေါ်လို့ ကျေးဇူးတင်ပါတယ်ခင်ဗျား.. ရိပ်သာမဝင်ခင် အဘိဓမ္မာကို အရင် သင်ယူပါ့မယ်.. နို့မို့ စကားပြန်မပါဘဲ ကုလားကားကြည့်သလိုဖြစ်နေမှာစိုးလို့ပါ..
အသက်ကြီးလာရင် ဘယ်သူ့ကိုမှ အားမကိုးရတဲ့သူဖြစ်ချင်တယ်.. အခုကတည်းက စုထားဆောင်းထား ပလန်ချထားမှ ထင်တယ်နော်.. (အပျိုကြီးဖြစ်ချင်လည်း ဖြစ်မှာဆိုတော့)
မနေ့က FB မှာ ဖတ်ရကတည်းက ပြောချင်နေတာ..။
ပင်စင်ယူဖြစ်တော့ စာများများဖတ်၊ စာများများရေးဖို့ အချိန်ပိုရတာပေါ့…။ မိသားစုအတွက်လဲ အချိန်ပိုပေးနိုင်သွားပြီ..
အာတီဒုံနဲ့ အန်တီအေးဆီလဲ တလှည့်ဆီသွားပါ…
ဟဲ့ ခလေးမ.. စကားပြောရင် အနှောင့်အသွားလွတ်ပါစေ..
ကျုပ် ပင်စင်ယူပြီး ဟိုနှစ်ယောက်ဆီ တလှည့်စီ သွားပေါ့ လို့ တိုက်တွန်းတာတော့ မကောင်းဘူးနော်..
သူတို့ဆီမှာ အဘိဓမ္မာ တရားသွားလေံလာပါ လို့ ပြောဟာ..
ကျန်းမာတဲ့အချိန် သွားနိုင်သမျှ သွားတာကောင်းပါတယ်..
စာဖတ်တာကို အချိန်များများပေးပြီး ပိုတဲ့အချိန်က တရားရှာရမှာ.. ခုထိ ကိုယ်မှာ တရားကမရှိသေး..
အမှန်က အသက် ၆၀ ဆိုတာ ပင်စင်သက်လို့ ဘာလို့ ထားလည်းမသိ။
သတိကောင်းရင် တွေးခေါ်မှု စဉ်းစားနိုင်ချေ အတွေ့အကြုံတွေ အကြွယ်ဝဆုံး အရွယ် ဘာလို့ နားခိုင်းကြလည်းမသိ။
ခန္ဓာနဲ့ ရုန်းရတဲ့သူတွေအတွက်တော့ ဒီအရွယ် ထိဘဲ လုပ်နိုင်ပေမဲ့
ခေါင်းသုံးပြီးလုပ်တဲ့ အဘတို့ကတော့ ၇၀ကျော်ထိ အလုပ်လုပ်သွားကြတယ်မဟုတ်လား.
ခုထိ ပင်စင်မယူဘဲ ၇၀ကျော် လူငယ်လေးတွေလဲ လုပ်နေကြတုန်းဘဲလေ..